I-CNC Machine eyenziwe ngokwezifiso i-Hardware China Manufacturer
Incazelo:Ukuzisika kwe-CNC Hardware,Isevisi eyenziwe ngokwezifiso i-Fastener,CNC Machine Hardware
Home > Imikhiqizo > Inkonzo yokusika ye-CNC Ne-Phrinta > I-CNC eyenziwe ngokwezifiso i-Hardware > I-CNC Machine eyenziwe ngokwezifiso i-Hardware
I-Model No.: CNC-Hardware
Ikhodi ye-HS: 7415290000
I-Hardware luhlobo lwengxenye esetshenziselwa ukubopha futhi ukuxhuma futhi isetshenziswa kabanzi.
I-Hardware esetshenziswa kabanzi ezimbonini, kufaka phakathi amandla, izinto ezisebenza ngogesi, izinto zikagesi, imishini, imboni yamakhemikhali, i-metallurgy, isikhunta, imboni ye-hydraulic nokunye.
Kuboniswa ngezinhlobonhlobo ezahlukahlukene zokucaciswa, ukusebenza okuhlukile nokusetshenziswa, kanye nesilinganiso esiphakeme sokumiswa, ukuhlelwa kwe-serialization kanye nokwenziwa okujwayelekile.
Isitoko sethu esijwayelekile sama-hardwares kufaka phakathi ama-screws, ama-standoffs, ama-washer, namantongomane. Ukuzisika kwe-aluminium ye-CNC kanye ne-CNC eyenziwe ngokwezifiso i-hardware ayitholakali.
Uma udinga ukusika kwe-CNC , ukusizakala kwe-Fastener service , ne- CNC yemishini . Pls usithumele ifayela by .stp noma .step
Izigaba zomkhiqizo : Inkonzo yokusika ye-CNC Ne-Phrinta > I-CNC eyenziwe ngokwezifiso i-Hardware
I-CNC Machine eyenziwe ngokwezifiso i-Hardware Xhumana Nanje
I-Hexagon Bolt eyenziwe ngokwezifiso eziphezulu ezenziwe ngokwezifiso neNut Xhumana Nanje
Umkhiqizo we-Hardware Hardware we-CNC Xhumana Nanje
Amantongomane we-titang titanium abekiselwe umbala Xhumana Nanje
Ukuzisika kwe-CNC Hardware Isevisi eyenziwe ngokwezifiso i-Fastener CNC Machine Hardware Ukuzisika kwe-Carbon Fibre Ukusikwa kwe-Carbon Laser Ukuzisika kweCarbon Cnc Ukuzisika Kwepulangwe Ukuzisika Komshini we-CNC
Ukuzisika kwe-CNC Hardware Isevisi eyenziwe ngokwezifiso i-Fastener CNC Machine Hardware Ukuzisika kwe-Carbon Fibre Ukusikwa kwe-Carbon Laser